Madaxda G20 ee dhaqaalaha dunida ka hadlaya oo lala yaabay qarashka ku baxaya – SBC
Madaxda G20 ee dhaqaalaha dunida ka hadlaya oo lala yaabay qarashka ku baxaya
Posted by editor on November 6, 2011 Comments
Hogaamiyeyaasha wadamada dunida ee ku mideysan kooxda G20 ee ka shiraya dhaqaalaha liita ee dunida, burburka dhaqaalaha & sicir bararka saameeyey aduunka ayaa waxaa lala fajacay dhakhliga faraha badan ee ku baxaya shirkooda dhawrka maalin ahaa.
Xili ay ka hadlayaan oo ay ka shirayaan dhibaatada dhaqaale aaduunka ka taagan waxay hogaamiyeyaashani degeen Hotelo qolalku ay ka badan yihiin 50 kun oo doolar.
Madaxdan oo ku shiray magaalo xeebeedka loo dalxiiska tago ee Cannes ee dalka Faransiiska waxaana la yaab ku noqotey dadka aduunka ee ay sida weyn u saameysay dhibaatada dhaqaale qarashka xad ka baxa ee jiifka, baashaalka iyo qamri cabida ah ee ay ku ciyaarayaan.
Dadka dhaqaalaha aduunka la socda ayaa sheegay in shirkan labada maalin ah ay ku baxday inka badan 1 milyan oo doolar taasi oo ku baxaysa qarashka ergooyinka, maadama ay degan yihiin Hoteelada aduunka ugu qaalisan uguna raaxad badan.
Madaxweynaha Faransiiska Nicolas Sarkozy oo shirkan martigalinaya waxaa isaga lagu soo dalacay qarashkii ugu badnaa ee biilasha ah, wuxuu deganaa shan qaybood oo ka mid ah Hotelka Majestic gaar ahaan qaybta madaxa (Presidential Suite), halkii qayb oo ka mid ah shantaasi deegaan habeenkii qiimahiisu waa 50 kun oo doolar.
Madaxweynaha Ruushka Dmitri Medvedev & Ra’isalwasaaraha Jarmalka haweenayda lagu magacaabo Angela Merkel iyagu waxay degan yihiin qolal ka yaryar kuwa madaxweyne Sarkozy kuwaasi qiimahoodu habeenkii u dhaxeeyo 14 kun ilaa 40 kun oo doolar.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama wuxuu deganaa deegaan loogu magac darey Grace Kelly suite oo ku dhexyaal Hotelka caanka ah ee Carlton Hotel, haweenayda qaybtaasi Hotel-ka loogu magacdarey waxay aheyd haweenay Mareykan aheyd oo Atarisho aheyd oo markii dambe guursatey boqorkii Rainier III Prince of Monaco.
Hotel Carlton wuxuu dhinaca ku hayaa badda Mediterranean qofka deganna wuxuu ka ildoogsanayaa baddaasi bilicdeeda, qolalka deegaanka uu deganaa madaxweyne Obama qiimihiisu habeenkii waa 40 kun oo doolar.
Boqorka dalka Sacuudiga Boqor Abdullah bin Abdul-Aziz Al Saud oo ka mid ah hogaamiyeyaasha shirkan ka qayb galey wuxuu degaana deegaan qiimihiisu habeenkii yahay 35 kun oo doolar, waxaana ay isku qiime ahaayeen qaybta uu deganaa Ra’isalwasaaraha Talyaaniga Silvio Berlusconi.
Madaxweynaha Shiinaha Hu Jintao wuxuu deganaa qayb u gaar ah madaxweyneyaasha oo ku taal Gray d’Albion Hotel halkii habeen jiifkiisu wuxuu ku kacay 14 kun oo doolar.
Ra’isalwasaaraha Britain David Cameron isagu wuxuu degay Hotel iska meel dhexaad ah, waxaana la sheegay in uu ka hooseeyey in badan qaybaha ay ku raaxaysanayeen saaxiibadiisa, isagoo degay Hotelka Marriott habeenkiina jiifkiisu wuxuu ku kacay 2500 doolar oo kaliya.
Dadka Faransiiska ee canshuur bixiyeyaasha ah ayaa waxay ka caroodeen lacagta dhanka amaanka & deegaanka ee shirkaasi ku baxdey ee ay ku raaxaysanayaan madaxda aduunka, waxaana la sheegay in 80 milyan oo doolar ay ku baxdey ilaalinta dhanka amaanka ee madaxda.
Jiifka oo kaliya ma ahan waxa qaaliga ah ee qiimahooda laga qayliyey waxaa kaloo aad loola yaabay qiimaha biyaha, Shaaha, bunka (Coffee) ama qamriga Hoteeladaasi lagu fiiqsadey, tusaale ahaan Hotel-ka Carlton ee uu degaanaa Madaxweyne Obama xabada sandwich-ka ah waxay joogtaa 25 doolar.
Cuntada madax tiris qofkii waa 200 doolar, koob Coffee ama bun ah 15 doolar, hal koob oo cabitaan ah waa 10 doolar.
Haweenay afhayeen ah oo u hadashay maamulka magaalada Cannes waxay sheegtey in dawlada Faransiiska oo shirka martigalinaysa ay bixinayso qarashka Jiifka, qarashkaadka yar yar sida cuntada & cabitaanka.
Ciidamo gaar ah oo ilaalinaya amaanka, kuwa ka hortaga argagixisada, iyo booliis loogu tala galay sugida amaanka madaxdan ayaa lagu daadiyey magaalada Cannes, waxaana tiradooda lagu sheegay 12 kun.
Gaadiidka gaashaan ee ciidamada, diyaaradaha hawada ilaalinayey, doonayaha hubaysan ee amaanka loogu tala galay ayaa waxaa la sheegay inay ku baxdey qarash gaaraya 35 milyan oo doolar.
hahah Muxuyahay Dhaqaleha ay ka Hadlayan? Dulkaas ayagaba Dhaqalihi Aduunka nus La Degay. Hadii ay Runtahay intaas oo Kharash ah in ay ku Baxaday Dhoowr Maalmood oo ay shir Lahayeen.
Dhinaca Amaanka Dhaqalaha ku Baxa Waxay Ilatahay waa Surto Gal Xalada Wakhtiga Lagau Jiroh Darted. Balse Kafeega iyo Shaah waxan Oranlahaa Termus ku Qaata.
dhaqaalahaan waxaa lagu raadinayaa dhaqaale kale oo lagu soo kabo marka cayaar maaha inuu bixiyo fransiisku lacagtaa, waxayse ka go’an tahay meelo kale.
waa xaggee meelaha kale ee ay ka imanaysaa? bal adba.